Momba anay - Hangzhou Better Daily Products Co., Ltd.
Niorina tamin'ny 2015. Izahay dia orinasa mirotsaka amin'ny famokarana OEM sy ODM amin'ny vokatra ampiasaina isan'andro.
Mpanamboatra matihanina lena ny lena.
Izahay dia mifantoka amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny fivarotana famaohana lena amin'ny sokajy samihafa. Ny sokajy safo mando dia misy famafazana toaka, fanesorana otrikaretina, famafana fanadiovana, fanesorana ireo makiazy, solo-jaza, safotra fiara, soloin'ny biby fiompy, famafana an-dakozia, solo-maina, solo-tarehy, sns. Mandritra izany fotoana izany, manana andiana vokatra koa izahay toy ny mpanadio tanana sy sarontava. Manome serivisy namboarina ho an'ny mpanjifanay izahay. Mifantoka amin'ny laharam-barotra telo samy hafa izahay izay mitondra lanjany avo lenta ho an'ny mpanjifanay toa ny orinasa simika hafa. Ny teny filamatra ataonay dia ny "Safety, R&D ary Serivisy".
Manana fahazoan-dàlana manafatra sy manondrana izahay. Azo antoka ny zo hanondrana ny vokatra. Ny vokatray dia voasoratra anarana amin'ny EPA, FDA, MSDS, EN, CE ary fanamarinana hafa. Raha manana fepetra takiana fanamarinana hafa ianao, dia tena vonona ny hifampiraharaha aminao izahay hamita;
Ny vokatra dia aondrana eran'izao tontolo izao. Izahay dia manolo-tena hanome vokatra sy serivisy kalitao isaky ny marika.
Better Daily Products Co., Ltd. dia manana ekipa mafana sy sariaka manam-pahaizana za-draharaha amin'ny famokarana, varotra, fitaterana iraisam-pirenena ary fitantanana ankapobeny, ny roa amin'izy ireo dia manana traikefa asa matihanina maherin'ny 10 taona. Nahazo dera be dia be avy amin'ny mpanjifa izahay noho ny serivisy haingam-pandeha sy be fiheverana noho ny vokatra avo lenta sy ny ekipa marketing mavitrika.
BETTER dia manome ambaratonga serivisy tena tsara ary tohanan'ny soatoavin'ny fahatokiana, ny tsy fivadihana ary ny fitiavantsika ny kalitao. Izany no mahatonga ny ankamaroan'ny mpanjifanay tsy mivadika mandritra ny taona maro. Nahavita asa tsara foana izahay.